Ny fitsidihana ny Thoroughbred County dia tsy ho feno raha tsy miaina andro fifaninanana amin'ny iray amin'ireo hazakazaka malaza ataontsika eran-tany na mahita ireo soavaly akaiky eo amin'ny Stud Nasionaly Irlanda.
Nilaza izy ireo fa rehefa maharitra ny angano dia manaraka ny tantara. Ny angano dia nilaza fa i Fionn mac Cumhaill sy ny mpiadiny dia nihazakazaka ny soavaliny teny amin'ny lemaka taloha an'i Curragh. Ny tantara dia milaza amintsika fa ny kalesin'ireo mpanjaka sy mpiadidy tamin'ny taonjato faha-3 dia nihazakazaka teto. Ity faritra manan-tantara any amin'ny Faritra Atsinanana Irlandy ity dia mbola mijanona ho fo matin'ny renivohitra mpitaingenan'i Irlandy.
Mandany fotoana amin'ny hazakazaka - miaraka amina hazakazaka mihazakazaka marobe manerana ny County Kildare, ny fientanam-po amin'ny hazakazaka iray dia fotoana iray iainana. Maninona raha mijery ny ambanivohitra amin'ny soavaly, mandehandeha amin'ny lalan'ny firenena, amin'ny tany taloha sy ala maintso. Ary mazava ho azy, tsy misy fitsangatsanganana any Kildare raha tsy vita ny fitsidihana ny Iram-pirenena Irlandey izay hahitanao ny tantaran'ny soavaly be taloha.